အစ္စလာမ်ဘာသာရှိ ဘုရား၏အမည်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
အပ်စမာအိုဟွတ်စနာ သို့မဟုတ်အရှင်မြတ်၏မွန်မြတ်သော နာမတော်များဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ် သာသနာတွင် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အတွက်ခေါ်ဆိုသည့် အမည်နာမတော်များကိုဆိုလိုသည်။ နာမတော်များ၏အရေအတွက် မှာ ၉၉ ခုဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့်ကုရ်အာန်၌ဖော်ပြထားသည်။ အချို့ကလည်းထိုအရေအတွက်ထက်များသည် ဟုယုံကြည်ထားကြသည်။
အရှင်မြတ်၏နာမတော်များသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၌ ၂၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး ၉၉ ခုကို အပ်္စမာအိုဟွတ်စနာ ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ကျန်ရှိသောအမည်နာမတော်များမှာ ဂုဏ်တော် များ ၊ ပေါင်းစပ်ထားသည့်နာမတော်များဖြစ်သည် မည်သို့ဆိုစေ မွတ်စလင်မ် များသည် မွန်မြတ်ကောင်းမွန်သောအမည်နာမတော်များကို ၉၉ ခုသာရှိသည်ဟုယုံ ကြည်ထားသည်။
နာမတော် ၉၉ ခုထဲမှ ၈၅ ခုသည်ကျမ်းမြတ်တွင်ဖော်ပြထားသည် ၊ သို့သော်ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမဟုတ် ဘဲအချို့မှာ ပြုခြင်း ၊ ဖြစ်ခြင်းပြကြိယာများအနေနှင့်ဖော်ပြထားသည်။ သုတေသနပညာရှင်များက ဟဒီးစ် ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင်၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရာ အားလုံးသည်အရှင့်၏ ဂုဏ်တော်များသာဖြစ်ပြီး အရှင်မြတ်၏ တစ်ခုတည်းသောနာမတော်မှာ الله အလ္လာဟ် ဖြစ်သည်။
၂ فهرست نام‌های نیکوی خداوند
၃ နာမတော် အရေအတွက်များ
၄ ကုရ်အာန် တွင်လာရှိသော အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ
၄.၁ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် တွင်မြင်သာစွာဖော်ပြထားသည့် အရှင့်၏ နာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်များ
၄.၂ ရိုးရှင်းမြင်သာမှုမရှိသော နာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်များ
၅ ကျမ်းမြတ်တွင်နောက်ထပ်လာရှိသော နာမတော်များ
၇ အခု ၁၀၀ မြောက်နာမတော်
အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ ကိုသုံးပိုင်းခွဲထားသည် -
- အပ်္စမာအေဂျမာလီ - (၅၅ ခု) ကရုဏာတော်နှင့်ရိုဇီရိက္ခာ အလွန်အကျိုးရှိသည်။.
- အပ်္စမာအေဂျလာလီ - (၂၂ ခု) တိုက်ခိုက်ရန်လိုမှုအတွက် အကျိုးရှိသည်။
- အပ်္စမာအေမွရှ်သရပ်က် - ( ၂၂ ခု ) မိမိ၏ နီယသ် ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ သည့် ၂ ခု၏အကျိုးအာနိသင်များလည်းရှိသည်။.
အရှင်မြတ်၏နာမတော်များထဲမှ မည်သူမှမသိနိုင်သောနာမတော်များကို အစ်္စမေအာ့အ်ဇမ် ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း နာမတော်ကို ရွတ်ဖတ်လိုက်ပါက ဖတ်ရွတ်သူ၏ဆန္ဒအတိုင်း အရာရာကို ဖြစ်စေသတည်းဆိုသည့်အလား ဖြစ် ပေါ်လာမည်ဖြစ်၏။ ( ထိုနာမတော်များကို အရှင်မြတ်စေလွှတ်တော်မူသော ဟွတ်ဂျသ် များသာသိရှိတော်မူ၏။)
فهرست نام‌های نیکوی خداوند[ပြင်ဆင်ရန်]
အေမာမ် ဆွာဒစ်က် (အစ) ၏ ဟဒီးစ်တော်မှ ဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ -
«အရှင်မြတ်အတွက် နာမတော် ၉၉ ခုရှိ၏ မည်သူမဆို၎င်းနာမတော်များကိုဖတ်ရွတ်ပါက ဂျန္နသ် သို့ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ الله، الإله، الواحد، الأحد، الصّمد، الأوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلی، الأعلی، الباقی، البدیع، الباریء، الأکرم، الظّاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحَفِی، الرّبّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّاری، الرّازق، الرّقیب، الرّؤوف، الرّائی، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السید، السبوح، الشهید، الصّادق، الصانع، الطّاهر، العدل، العَفُوّ، الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، اَلفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوی، القریب، القیوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجید، المولی، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافی، کاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدّیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی.»
အရှင်မြတ်၏ နာမတော်များသည် ၉၉ ခုသာမက ထို့အပြင်မြောက်မြားစွာသောအမည်နာမတော်များလည်းရှိ၏။ ရှီအာ စွန်နီ မှ ရေဝါယသ်ပေါင်းများစွာတင်ပြထားရာ အချို့ကနာမတော်ပေါင်း ၁၀၀၁ ခုတင်ပြထားပြီး အချို့က မိုဘာရပ်က် နာမတော်ပေါင်း ၄၀၀၀ တင်ပြထားသည်။.
ကုရ်အာန် တွင်လာရှိသော အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါ အာယသ် များသည် အရှင်မြတ်၏ အပ်္စမာအိုဟွတ်စနာ များကိုရည်ညွှန်းထားသည်။:
* စူရာ သွာဟာ - ၈ الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی
*(အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်မှတစ်ပါးအခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ရာ အရှင်ဟူ၍မရှိ အရှင်အတွက်မွန်မြတ်ကောင်းမွန်သော နာမတော်များရှိ၏။)
* စူရာ အဲအ်ရာဖှ် - ၁၈၀ و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها
*( အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်အတွက်မွန်မြတ်ကောင်းမွန်သော နာမတော်များရှိ၏ ထို့နောက်၎င်းတို့အားဖတ်ရွတ်ပါလေ။)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် တွင်မြင်သာစွာဖော်ပြထားသည့် အရှင့်၏ နာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်သည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌ နာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်များကို ရိုးရှင်းမြင်သာစွာဖော်ပြ ပေးထားသည်။
ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် ၏အချို့အရေးအသားများတွင် နာမတော်နှင့်ဂုဏ်တော်များကို မြင်သာထင်သာစွာမ တွေ့ရှိရပေ ၊ ၎င်းတို့မှာ အရှင်မြတ်၏လုပ်ရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကိုဖော်ကျူးသည့်ဂုဏ်တော်များ ဖြစ်ပြီး မာ့အ်စူမီးန် (အစ) တို့၏ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များ အိလ်မေကလာမ် ၌ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည့် ဂုဏ်တော်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ: آمِر • بادئ • باسط • باطش • باعث • باقی • بانی • جازی • جلیل • حاشرالخلایق • حاکم • حامل • حنّان • خاذل • داحی • داعی • دلیل • ذارئ • ذاکر • رائی • راحم • رازق • راضی • رامی اصحاب‌الفیل • ساخط • ساقی • سالخ • سامع • شارع • شافی • شاق • صارف • ضارب‌الأمثال • طاحی‌الأرض • طامس عیون الأعداء • طاوی السّماء • عائد • عادل • عاصم • عافی • غضبان • فاتح • فاتق • فادی • فارض • فارق • فاصل • قائل‌الصّدق • قابض • قاسم • قاصم • قاضی • قاطع • کاتب‌الحسنات • کاره • کاسی • ماحی • ماد • ماهد • مُبارِک • مُبَدِّل • مُبدِی • مُبَشِّر • مُبْطِل • مُبَیِّن • مُتجاوِز • مُتَجلّی • مُتَقبّل‌الحسنات • مُتْقِن • مُتکلِّم • مُتَوَلّی • مُثْبِت • مُثَبّت • مُثیب • مُجازی • مُجلّی • مجیر • مُحاسِب • مُحبّ • مُحَبِّب • مُحَذِّر • مُحَرِّم • مُحسِن • مُحْصی • مُحِقّ الحق • مُحْکِم • مُختار • مُخَفِّف • مُخلِص • مُخَوِّف • مُدافِع • مُدَبّر • مُدْرک • مُدمِّر • مُذلّ • مُذَلِّل • مُذْهِب • مُرْتَضی • مُرْسی • مُرَکِّب • مُرید • مُزَّکی • مُزوِّج الحور • مُزَیِّن • مُسبِغ • مُستَجیب • مُستَغنی • مستوی علی‌العرش • مُسخِّر • مُسلِّط • مُسَلِّم • مُسْمِع
အရှင်မြတ်၏ အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ များကိုဇယားနှင့်ဖော်ပြခြင်း အရှင့်၏နာမတော်များသည် အစ္စလာမ့် ၏စွန်နသ်တော်အရ အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ ဟုကျော်ကြားသည် ၊ နာမတော်
များ၏ နာမ်သင့်ဂဏန်း နှင့်တကွဖော်ပြပေးထားသည်။
ဖော်ပြပါ နာမတော်များသည် အရေအတွက်များပြားသော်လည်း အများအားဖြင့်တူညီမှုရှိကြသည်။.
ဖော်ပြပါ နာမတော်များသည် အရေအတွက်များပြားသော်လည်း အများအားဖြင့်တူညီမှုရှိကြသည်။
ကျော်ကြားသော အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ ၉၉ ခုထဲမှမဟုတ်သည့် အခြားသော အမည်နာမတော်များကိုလည်း ကုရ်အာန်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ .
အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားမှဂုဏ်တော်များသည် ဂုဏ်တော် ၉၉ ပါးတွင်မပါဝင်ပါ။.
ဆူဖှီ တို့သည် အခု ၁၀၀ မြောက်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်သည် အလွန်မြင့်မြတ်သည်ဟုယုံ ကြည်ထားကြသည်။ ၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုအရ အရှင်မြတ်၏ပြီးပြည့်စုံမှု မြင့်မြတ်မှုများကို ၎င်းအမည်နာမတော်၌ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည်အခု ၁၀၀ မြောက်နာမတော်ကို အစ္စမေအာ့အ်ဇမ် ဟုဆိုကြသည်။ .
အခု ၁၀၀ မြောက်နာမတော်[ပြင်ဆင်ရန်]
ရှီအာ စွန်နီ ဟဒီးစ် များ၌ဖော်ပြသည်မှာ - အခု ၁၀၀ မြောက်နာမတော်ကို အေမာမ်မဟ်ဒီ (အဂျ) သခင်ကသာ ပြသတော်မူမည်ဖြစ်၏။ .
အပ်္စမာအိုဟွတ်္စနာ များကို သားရေ ၊ စာရွက် နှင့် ပိတ်စများပေါ်တွင်ရေးသားကြသည် ၊ ၎င်းကို အပ်္စမာအ်နဝီစီး ဟုခေါ်ဆိုပြီး ကာဂျာရ် ခေတ်ကာလမှစ၍ အီရန် တွင်ထိုကဲ့သို့ရေးသားခြင်းများစတင်ခဲ့သည်။
== ဆက်နွယ်သည့်အကြောင်းအရာများ ==
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Encyclopedia of The Orient (نوامبر ۲۰۰۷)။ 19 October 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ်ဘာသာရှိ_ဘုရား၏အမည်များ&oldid=689828" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။